Muddaharaadyada dalka Brazil - BBC Somali
Muddaharaadyada dalka Brazil
21 Juunyo 2013
In ka badan hal malyuun oo qof ayaa ka qayb qaatay muddaaharaadyadii ugu danbeeyey oo laga oogey ilaa 100 magaalo dalka Brazil. Muddaharaadyada noocan ahi waxay bilaabmeen toddobaad ka hor, waxayna ka dhasheen cadho ka timid nooliga gaadiidka lagu raaco oo kor u kacay, iyo weliba musuqmaasuqa oo aad u fara badan. Waxana dadweynuhu ay ka sii cadhoodeen lacagta faraha badan ee lagu bixinayo qabanqaabada, dhismayaasha iyo garoonnada loogu talo galay koobka ciyaaraha caalamiga ah ee kubbadda cagta oo sannada danbe lagu qaban doono dalka Brazil. Meelo badan ayaa waxa ka abuurmay isku-dhac, kuwaasi oo keenaya dhimasho iyo dhaawac intaba.
Madaxweynaha dalka Brazil oo ah haweeneyda la yidhaa Dilma Rousseff waxay baajiyey socdaal ay ku tegi lahayd dalka Japan, sababta oo ah muddaaharaadyadan awgood iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ka dhashay. Madaxweynuhu waxa kale oo ay ku baaqday in maanta oo jimacaha ay golaha dawladdu shir degdeg ah iskugu yimaaddaan, si looga hadlo xiisadahan.Magaalooyinka waaweyn ee ay ka dhaceen isku dhacyadu waxa ka mid ah Rio de Janeiro oo bileysku ay ku fureen dadkii muddaharaadayey qiiqa dadka kaga ilmaysiiya iyo xabbado caag ah. Ugu yaraan 26 qof ayaa ku dhaawacmay halkaasi, waxana muddaaharaadyadu ay xidheen goobo ay ka mid yihiin xarumihii badhasaabka gobolka iyo duqa magaalada.
Magaalo-madaxda Brasilia, waxa la gubey afaafkii wasaaradda arrimaha debadda, waxa kale oo la weeraray dhismayaal badan, waxana la bililiqaystay hanti badan oo iskugu jirta kuwa dawladda iyo kuwa gaarka ah.